तातोपानी नाकाबाट ११८ किलोग्राम सुन बरामद – Medianp
तातोपानी नाकाबाट ११८ किलोग्राम सुन बरामद
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०७४१२:४८0
मेलम्ची, २९ माघ । सिन्धुपाल्चोकबाट छ वर्षमा ११८ किलोग्राम ११ तोला ९३ लाल अवैध सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । तातोपानी नाकाबाट अवैध रुपमा सुन तस्करी गरी लैजाने क्रममा पछिल्लो छ वर्षमा प्रहरीले बरामद गरेको सुन तातोपानी भन्सार कार्यालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चौताराको तथ्याङ्कअनुसार २०६९ साल पुस १ गते बेवारिसे अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल तातोपानीले तीन किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो । सीमा प्रहरी चौकी कोदारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसे तथा सशस्त्र प्रहरी बलले २०७० सालमा मात्रै लुकाई–छिपाई काठमाडौं लैजाँदै गर्दा तातोपानी तथा बाह्रबिसे क्षेत्रबाट ३२ किलोग्राम पाँच तोला ६४ लाल सुनसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले सुन ल्याउँदै गरेका तातोपानी–३ का साङ्बो शेर्पा र निङ्नर शेर्पा तथा मेलम्ची–८ की विमला थापालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका तीनैजनाले भूकम्पअघि नै लुकाएर राखेको सुन विभिन्न कारणले ल्याउन नसकेको र सुन राखेको घरधनीले आत्महत्या गरेपछि लैजाने प्रयास गरेको बयान दिएका भए पनि उक्त बयान बनावटी भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
खासाबाट कति सुन अवैध रुपमा काठमाडौँ भित्रियो भन्ने यकिन तथ्यांक प्रहरीसँग छैन । नेपाली बजारमा सुन ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मासिक १५ किलोग्राम मात्र ल्याउन पाउने प्रावधान छ । नेपाली बजारमा सुनको मागलाई वैधानिकताले नथेगेकाले तस्करी बढेको हो र तातोपानी नाकाबाट सुन वैध रुपमा ल्याउन नपाइने भएकाले पनि व्यवसायीले तस्करी गर्ने गरेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । अहिले चीनसँगको सीमा तातोपानीको लिपिङसम्म सडक पुगेको छ । नेपालकातर्फबाट तातोपानी नाका खोल्नका लागि पटक पटक अनुरोध गरिँदै आएको छ । रासस
प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न, एमालेमा नेता नै नभएर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न लागेको हो र ? (भिडियो)
दुवै मिर्गौला पीडित बर्मालाई अन्तराट्रिय नेपाली रक्तदाता द्वारा आर्थिक सहयोग
कश्मीरमा डरलाग्दो आक्रमणका मूख्य योजनाकार, काठमाडौँबाट विमान ‘हाइज्याक’ गर्ने जैश ए मोहम्मद
द्रुत गतिमा भोली सम्ममा विशाल ग्रह पृथ्वीमा आउँदै, परिमाण कति खतरनाक !
मन्दिरमा बिहे गर्ने जोडीले पुजारीलाई नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने !
वीर अस्पतालको लिफ्ट चुँडिदा दुईजनाको मृत्यु, अर्का एक घाइते